Afrika Mainty · Desambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Desambra, 2012
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Desambra, 2012
Global Voices: Misy Dikany Ny Feo Tsirairay
Amerika Latina 29 Desambra 2012
Ny hevitra hoe misy dikany ny feo tsirairay dia tena mifanakaiky amin'ny hevitry ny Global Voices amin'ny maha-vovonana sy vondrom-piarahamonina azy. Raha nivondrona ny mpiserasera amin'ny aterineto hanao izay handrenesana ny feony amin'ny fotoana izay iadian'ireo manam-pahefana eto amin'izao tontolo izao hevitra ny amin'izay hitantana ny aterineto, nanapa-kevitra izahay ny hangataka amin'iro vondrom-piarahamonina samihafa misy anay mba handray anjara sy hiteny ny olana mafonja amin-dry zareo sy hanao jery todika ireo olana notaterintsika nandritra ny taona amin'ny fiheverana fa misy dikany ny feo tsirairay.
Ghana 29 Desambra 2012
Vehivavy Sodanezy Mpanao Gazety Nampijaliana, Manao Antso Avo
Sodàna 28 Desambra 2012
Sumaya Ismail Hundosa, 34 taona, dia nisy naka an-keriny tao an-tranony tamin'ny 29 Oktobra, ary hita taty aoriana nisy nanipy tany anaty fotaka tany amin'ny faritra somary lavidavitra any Khartoum tamin'ny 2 Novambra, dimy andro taorian'ny fakàna azy an-keriny. Satria tsy nosokafana ny andinindininy mikasika ny fampijaliana an'i Hundosa teo aloha, dia novalian'ny Sodanezy mponin'ny aterineto tamin'ny alahelo sy hatezerana izany, maneho ny fiaraha-miory sy ny firaisan-kina amin'ilay mpanao gazety, araka ny nosoratan'i Usamah Mohamed
Fanafihan'ireo Vondrona Mpikomy Tao Ndélé sy Bria Ao Amin'ny Repoblikan'i AFrika Afovoany
Repoblikan'i Afrika Afovoany 25 Desambra 2012
Tao anatin'izay herinandro lasa izay, notafihan'ireo mpikomy ny tanànan'i Ndélé sy i Bria ary nandrahona ny fitondran'ny filohan'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany François Bozizé izy ireo. Tsy manankery intsony ankehitriny ireo fifanekena momba ny filaminana nosoniavina tamin'ny taona 2007 noho ireo fanafihana vaovao izay niteraka hetsi-bahoaka goavana. Notafihan'ireo mpikomy i Ndélé Tamin'ny 10...
Oganda 22 Desambra 2012
Ahiana hiitatra ny fifanandrinana misy ankehitriny any amin'ny faritra Kivu ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo (DRC). Sarotra ny manadihady ity kinovan'ny taona 2012 amin'ity fifandirana ity, indrindra moa fa hetsika mitam-piadiana mora miova, toerana [itobiana] sy politika, ny M23.
Amerika Latina 20 Desambra 2012
Football: Iza no Mitàna Ny Zava-Bita Tsara indrindra, Messi avy any Argentina sa Chitalu avy any Zambia ?
Arzantina 18 Desambra 2012
Saiky montsan'ilay mpilalao baolina fandaka Argentiniana Lionel Messi avokoa ny zava-bita tsara indrindra amin'ny baolina voarakitra ka anisan'izany ihany koa ny baolina tafiditra tanatin'ny taom-pilalaovana iray, sa tsy izay moa? Nisy azo nampifaninanina tamin'i Messi, izay mahavalalanina jerena rehefa milalao miaraka amin'ny ekipany ao amin'ny la Liga izay tsy iza fa ny FC...
Ny Perla Avy Amin'ny Media Momba an'i Afrika
Afrika Atsimo 16 Desambra 2012
Nisy ny fanatsotsorana momba an'i Afrika nifandrohy tamin'ny fanentanana #Kony2012 nataon'ilay ONG Invisible Children [Ankizy Tsy Hita]. Nisy fanentanana hafa natao avy eo ho fanitsiana ny kinendry. Efa tsy ampahafantarina intsony [en] ny fanombatombanan'ny fampahalalam-baovao momba an'i Afrika na dia efa nihena dia nihena aza ny fahadisoana tao anatin'ny taona vitsivitsy farany. Tsy mandehandeha fotsiny amin'izao...
Mpiasa An-Trano Malagasy Naolana sy Nampijaliana Tany Libanona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Desambra 2012
Noteren'ny nenintoany hifindra ho any Libanona hiasa an-trano i Marie, 14 taona. Rehefa tonga tany izy dia zary fahazarana ny nanolanan'ny mpampiasa azy. Rehefa fantany fa bevohoka izy dia noroahiny. Rehefa niteraka irery izy, dia natsipiny avy eny amin'ny rihana fahavalon'ny fanorenana avo ny zaza.
Fanentanana #Nimeregister Hampiroboroboana Ny fisoratana Anarana Hifidy Ao Kenya
Kenyà 14 Desambra 2012
Mampiasa ny tenifahatra #nimeregister ny keniana ao amin'ny Twitter handrisihana ny hafa hifidy sy hizara ny fampahafantarana ny fisoratana anarana, zava-niainana ary ny sary. Nimeregister dia fitambaran'ny teny Swahili sy anglisy (Sheng) izay midika hoe "nisoratra anarana aho."